အလုံမွို့နယျ ကမျးနားလမျးရှိ ရှဇေမ်မူထိပျကှနျဒိုခနျး ရောငျးပါမယျ။ (Code:ACR-1) ...
Ad Number S-8124119
May La Property Company Limited Close
Code(P-784/17) 💥ဝငျဒါမီယာမှာ မှ Luxury အပွညျ့ facilities အပွညျဘနဲ့နခေ...
Ad Number S-8123866
Code(C-645/0) Nawarat Luxury Condominium for...
Ad Number S-8123598
Ad Number S-8123267
Ad Number S-8122345
ရန်ကင်းမြို့နယ် Gonden City Condo 1650 Sqft အကျယ်ရှီ MBR1, BR2, F.F. အဆင...
Ad Number S-8122323
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်မွန်ကွန်ဒို၊ 14...
Ad Number S-8122291
Ad Number S-8124111
Ad Number S-8124097
Ad Number S-8124077
သံသုမာလမ်းမကြီးအနီး ဈေးတန်တိုက်သစ်ရောင်းမည် ရသ၀တီလမျးသှယျရှိ အခန်းအကျယ်ဝန်း 19 x 54 ပရှေိ 1F...
Ad Number S-8124057
ရတနာလမ်းမကြီးအနီး ဈေးတန်တိုက်ခန်းရောင်းမည် ကောလိယလမျးသှယျရှိ အခန်းအကျယ်ဝန်း 19 x 54 ပရှေိ 3F...
Ad Number S-8124038
Ad Number S-8124011
(၈) မိုငျ Junction 8 Condo ရောငျးမညျ/ ငှားမညျ။ 1250 Sq.ft အကယျြ5လှာ ။ 1MBR , 2BR Furniture ပါဝငျပွီး ။ lift, Car parking, security, city mart, shopping...
Ad Number S-8124001